Ihe omuma ihe omuma nke kachasi uru n'inweta ndi mmadu
Obere ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta ọrụ ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ nke azụmahịa ahụarụ ọrụ na ndị na-ahụ maka ọrụ ahịa nke atọ. Ọ bụrụ na ị kpebie inyefeụfọdụ ọrụ na otu oriri na-adabere ná mba ọzọ, nke a na-ezo aka na yadị ka mbupụ ala. Taa, n'inwe ike ịhapụ ọrụ ịzụ ahịa, ọtụtụ ndịobere ụlọ ọrụ na-ahọrọ ego ịchọrọ dị ka ihe ọzọ na-arụ ọrụ.Michael Brown, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-akọwauru dị ukwuu nke outsourcing maka obere azụmahịa.
Bugharịa site na ndozi ka akwụ ụgwọ agbanwe. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere onye na-akwụ ụgwọ ego.Ọ ga-achọ oche, kọmputa, mkpuchi ahụike, tii, na ụgwọ ọnwa ọ bụla,ma ọ bụ mmalite, ọ gaghị enwe ọrụ dị ukwuu maka ndị ọrụ niile ná mmalite.Ogbugbu na-edozi nsogbu ahụ maka gị. Mgbe ị na-achọpụta azụmahịa gịibu ọrụ, ị na-akwụ ụgwọ maka oge ọ bụla maka ọrụ ahụ, ịkwesighi inye yaihe onwunwe na, n'eziokwu, ị ga-enweta ọrụ ka mma karịa na ị na-akwụ ụgwọ maka ọrụemezuru nke ọma. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọrụ ndị ị na-aga na-agagharị, ị nwere ikena-akwụ onye ọzọ ụgwọ mgbe niile.
Nwee oge maka akụkụ azụmahịa nke ihe. Ndị na-ere ahịanwere ike jiri obi eziokwu ghara inwe oge iji lekọta akụkụ nke ụzụ haazụmahịa. Nke a gụnyere ihe dịka ntinye weebụ, azụmahịa ọdịnaya, SEOna ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'itinye ọrụ ndị a aka, ị ga-enweotutu oge n'aka gị iji lekọta azụmahịa n'onwe ya. Lekwasị anyalebara anya n'enye ndi ahia ma ka ndi ozo mee orueme ihe maka gị.
Nweta ego dị ka nnukwu ụlọ ọrụ egwuregwujiri. Nnukwu ụlọ ọrụ egwuregwu na niche gị nwere ike ịnweta ụlọìgwè ndị talent, na nke ahụ ga-etinye ha kilomita tupu gị. Ị nweghị ikena-enye gị ohere inwe ụlọ ọrụ ụlọ. Outsourcing na-enye gị ohereakwụ ụgwọ dị ukwuu na ọnụ ala ọ bụghị naanị site na obodo gị kama site na mba ọzọnakwa. Ebe ọ bụ na nke a agaghị abụ ọnụ efu, ị ga - enwe ike ịchekwa ego.
Lekwasị anya n'ebe ndị mmadụ nọ ebe ha chọrọ. Ikike na ọzụzụndị ọrụ dị oke ọnụ. N'ịbụ onye nmalite, ọrụ ịzụ ahịa gị nwere ikega-anọnyere gị obere oge, nke a pụtara na ndị ọrụ ahụị zụrụ azụ n'oge na-adịghị anya ga-amalite ọrụ maka onye ọzọ. Iji zereihe omuma a nile nke ichikota, nkuzi na icho ihe, ka ihe diarụ ọrụ mmanye na-arụ ọrụ maka gị.
Belata ego nke ngwaahịa na ọrụ gị. Eziokwu bụna outsourcing bụ ọnụ na n'otu oge ahụ, ị ​​ga-esi dị eluarụ ọrụ. Ọ dị nnọọ ọnụ ala karịa mgbe ị ga-eme nyochammepụta ngwaahịa, ahịa, ikesa na ịnyefe azụmahịa gị.Ọnụahịa azụmahịa kachasị elu na-egosi ọnụahịa dị elu maka ngwaahịa gị,n'ihi ya, ị ga-akwụ ụgwọ ndị ahụ maka ndị ahịa gị.
N'ikpeazụ, ọpụpụ dị mfe. Outsourcing azụmahịa ọrụ dika videoedezi, ahia, oru mgbasaozi mgbasa ozi, mmepe ọdịnaya naọtụtụ ndị ọzọ dị mfe. Na Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, ị nwere ike ịchọta nkàndị ọrụ ụlọ ọrụ dị njikere ịrụ ọrụ dị mma maka gị. Ndị ahịa anyị nweregosipụtara ịdị irè nke mmekọrịta dị otú ahụ, ya mere site ugbu a gawa, i nwere ikeenwetakwa uru ndị a Source .